हिजो साँझ घर आउँदा हैन यो छ्याङ जस्तो कल्ले के पठाएछ घराँ भनेर तर्सियाथें। आमाले हर्लिक्सको सिसी नपाएर होला कोकको बोतलाँ हालेर गामबाट घिउ पठाउनुभा रैछ। प्लास्टिकको बोतलाँ धेरै बेर राख्न हुन्न होला भनेर हर्लिक्सको सिसाँ घिउ खनाउन खोज्या, तताउँदा पुरै बोतल डढ्ने, घाममा सुकाउँदा नि पुरै ननिख्रिने रैछ। केही उपाय छ कोकको बोतलमा भएको घिउलाई कसरी खन्याउने हो ? सारै टेन्सन भयो यार। लउन... कस्तो लाग्यो? 0
काठमाडौं कसैकसैले जग्गा बेच्न पर्‍यो भने नि सम्झन्छन्...कसैले विद्यालयलाई दुई हजार रुपैयाँ दान दिने भोर पत्रिकाँ समाचार आए हुन्थ्यो भन्ने लागे नि सम्झन्छन्...